श्रींलकामा रिपोर्टिङ गर्ने ज्यकलिन कसरी बनिन् बलिउड स्टार ? (फोटोफिचर) « हाम्रो ईकोनोमी
श्रींलकामा रिपोर्टिङ गर्ने ज्यकलिन कसरी बनिन् बलिउड स्टार ? (फोटोफिचर)
ज्याकलिन फर्नान्डिसको जन्म ११ अगस्ट १९८५ मा बहराइनमा भएको थियो । ज्याकलिनका पूर्वज क्यानडा, मलेशिया र श्रींलकासँग जोडिएका छन् । शुरुवाती करिअरको कुरा गर्नुपर्दा मास कम्युनिकेशनमा ग्रयाजुएशन गरेपछि ज्याकलिनले श्रींलकामा टिभी रिपोर्टरको काम गरेकी थिइन् । उनले रिपोर्टिङ गर्दैगर्दा मोडलिङ इन्डस्ट्रि पनि जोइन गरिन् । त्यसबेला उनी र्याम्प वाकमा सहभागी हुने गर्थिन् ।
ज्याकलिनले २००६ मा मिस श्रींलका यूनिभर्सको ताज जित्न सफल भएकी थिइन् । साथै मिस यूनिभर्स प्रतियोगितामा श्रींलकाबाट प्रतिनिधित्व गरेकी थिइन् । ज्याकलिन २००९ मा मोडलिङको लागि भारत आएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनलाई अलादीन फिल्मको लागि प्रस्ताव आयो ।
सुरुमा हिन्दी भाषा बोल्न उनलाई गाह्रो हुन्थ्यो । तर उनले पछि हिन्दी भाषा सिकेकी थिइन् । भाषाको कुरा गर्नुपर्दा उनी इंग्लिस, स्पेनिश, फ्रेन्च र अरबी भाषा बोल्न सक्छिन् । ज्याकलिनले मर्डर २, हाउसफुल २, हाउसफुर ३, रेस २, जुडवा २, बागी २, रेस ३ र किक जस्ता फिल्ममा काम गरेकी छिन् । ज्याकलिनको आउन लागेको फिल्म ड्राइभ हो । उक्त फिल्म यही बर्ष (२०१९) मा रिलिज हुने बताइएको छ ।
सबन्धलाई मानिसहरु मुठ्ठीभित्र रहेको पुतलीसँग तुलना गर्छन् । मुठ्ठी बेस्सरी कस्नुभयो भने
निजगढ विमानस्थलको काम अघि नबढाउनू : सर्वोच्च
सर्वोच्च अदालतले बारास्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम अघि नबढाउन सरकारलाई आदेश
‘मिस वर्ल्ड’को भोटिङमा दोश्रो स्थानमा अनुष्का
मिस वर्ल्ड’को नेपाली सुन्दरी अनुष्का श्रेष्ठ भोटिङको दोस्रो स्थानमा छिन् । अनुष्काले
हिँड्दा– डुल्दा, सुत्दा– उठ्दा हामी तारन्तार मोबाइल प्रयोग गर्छौं । आज मोबाइलबाट
म प्रधानमन्त्री बन्नैपर्छ : बामदेव गौतम
यति राम्री श्रीमती र छोरी १९ दिन देखि बेपत्ता ,…
ग्रुप प्रधान सम्पादकमा अर्याल
बंगलादेशसँग नेपाल ४४ रनले पराजित
को को छन मंसिरको पहिलो हप्तामा थपिने नयाँ
मधेशीहरु भारतसँग मिलेको रहस्य खुल्यो, मोदीले के सिकाए
६ वटै मुख्यमन्त्री हटाउने सरकारको तयारी, को को
अर्थमन्त्री सहित १० मन्त्रीको जागीर चट्, यी हुन्
मन्त्रिपरिषद हेरफेरको तयारी, पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउँन ओली र
© 2019 हाम्रो ईकोनोमी